तपाइँ यो गलत गरिरहनु भएको छ! | Martech Zone
तपाइँ यो गलत गरिरहनु भएको छ!
बुधवार, अगस्त 19, 2009 आइतवार, अप्रिल २,, २०१। क्रिस लुकास
बजारका रूपमा हामी सबै पूर्णरूपमा सजग छौं कि व्यक्तिहरूको व्यवहार परिवर्तन गर्न कत्ति गाह्रो छ। यो तपाईले गर्न सक्ने कठिन चीज मध्ये एक हो। यो किन हो, गुगलले अहिलेको लागि निरन्तर खोज सफलताको मज्जा लिनेछ, किनकि मानिसहरू वेबमा केही चीजहरू खोज्नु पर्ने भएको खण्डमा "गुगल यो" मा अभ्यस्त छ।
यो जानेर, म ट्विटर र ब्लगमा हेर्ने व्यक्तिहरूको संख्याबाट म मोहित छु जसले अरूलाई उनीहरूको सोशल मिडिया गलत प्रयोग गरिरहेको छ भनिरहेछ। कुन कुराले मलाई अझ मोहित गर्दछ कि ती ती मानिसहरू हुन् जुन या त परामर्शदाताको रूपमा काम गरिरहेका छन् वा एजेन्सीहरूमा काम गरिरहेका छन्, चाहे यो PR, मार्केटिंग, वा सोशल मिडिया हो।
तपाइँ सोशल मिडिया कसरी प्रगत गर्ने र कम्पनीहरूलाई उनीहरूको व्यवसाय अनलाइन बढाउन कसरी मद्दत पुर्‍याउने भन्ने गोप्य रहस्य चाहनुहुन्छ? मानिसहरूलाई यो रोक्नुहोस् कि उनीहरूले यो गलत गर्दैछन् र मानिसहरूलाई कसरी तिनीहरूले यो अझ राम्रो गर्न सक्छन् भन्न सुरु गर्नुहोस्। कसैलाई पनि तिनीहरू गलत हो भनेर भन्न चाहँदैनन्, उनीहरू आफ्नो व्यापार कसरी राम्रो गर्ने भनेर जान्न चाहन्छन्। यो तपाईको व्यवसायलाई बढाउने र कर्पोरेट स्तरमा सामाजिक मिडिया अभ्यासहरूको उत्तम अपोशनको लागि एक सहज तरीका हो।
हामी सबै यी उपकरणहरू कसरी प्रयोग गर्ने सिक्ने छौं, व्यक्तिलाई सशक्त पार्ने र तपाईंको व्यवसाय बन्द भएको हेर्न।
टैग: गलतनियमहरूसामाजिक मिडिया नियमहरुगलततपाईं यो गलत गर्दै हुनुहुन्छ
सफलताका लागि २ Ste चरणहरू: खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन र व्यापार ब्लगिंग
Brody PR: जब तपाईंको सार्वजनिक सम्बन्ध फर्म फायर गर्न
अगस्ट,, २०१ 19 2009:२१ अपराह्न
म सहमत छु .. मैले भर्खरको पोष्ट गरें "सोशल मीडिया मलाई एक ट्यूटर चाहिन्छ?" म अधिक र अधिक व्यवसाय मालिकहरु सोच्न वा सामाजिक मिडिया मा संलग्न गर्न को लागी हेर्नुहोस् तर त्यहाँ एक सानो डिस्कनेक्ट छ। केहि अज्ञात छन् र अरूहरू सामाजिक मिडियाको क्षमताको अवमूल्यन गर्छन्। धेरैलाई "विशेषज्ञहरू" एक विशेषज्ञ वा दाबी गर्ने नतिजा तिनीहरू आफैंले हासिल गरेका छैनन भनेर दावी गरिरहेका छन्। ज्ञान र सिक्ने समयको अभावको साथ, व्यवसाय मालिकहरू केवल बेचिदैछन्। म सामाजिक मिडियामा ती अनुसरण गर्दछु र सम्मान गर्दछु जस्तो कि म तिनीहरूलाई एक वित्तीय सल्लाहकारको रूपमा हेर्दैछु। यदि वित्तीय परामर्शदाताले अझ सम्म आफूलाई वित्तीय स्थापित गरेको छैन, तिनीहरूले मलाई कसरी परामर्श गर्न सक्दछन्।
म मेरो ब्लग मा कुनै पनि प्रतिक्रिया को सराहना गर्दछु http://yougonetwork.com/johnnie_firari/2009/08/so… एक सानो व्यवसाय मालिक को रूप मा केहि म अझै आकार दिन्छ र गर्न प्रतिबद्ध गर्न को लागी काम गर्दैछु। धन्यबाद।